ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain U-Andres Iniesta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGosa lebhola leBhola eliyaziwa kakhulu ngeSiqheno; 'don Andrés'. Ibali le-Andres I-Iniesta Ibali labantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa abajonga iAndres Iniesta Biography Story enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye u-adieu, qalisa Qala.
U-Andres Iniesta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UAndrés Iniesta Lujánwas wazalelwa ngomhla we-11th kaMeyi, i-1984 kwidolophana e-Fuentealbilla, eSpain ngoyise, uJosé Antonio Iniesta (i-mongol yezoshishino) noMama, uMaría Luján Iniesta (umgcini wendlu).
Wazalwa njengomntu onenhlanhla nangomntwana ocebileyo. Ucebile kubazali bakhe neenhlanhla ukuvela kuMasipala omhle wase-Albacete, eSpain. Wakhula kumasipala wase-Albacete owaziwayo ngezinto ezimbini; Ipesenteji ephakamileyo zeentetho zaseSpain zendawo kunye newayini yabo efanelekileyo.
UAndres wayenakho konke ayekufunayo kwaye wayefuna ebomini njengomntwana osemncinci. Kananjalo, wayebahlonela umnqweno wabazali bakhe.
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Imisebenzi yokuqala
Waqala ukudlala eneminyaka eyi-10 kunye no-Albacete Balompié, iqela lommandla wase-Albacete.
U-Andres Iniesta Ubungqina Bomntwana
Ngeminyaka eyi-12, xa edlala kwintlalo, wakhanga umdla weeklabhu zebhola eziseSpeyin. Abazali baka-Iniesta baxhamle nomqeqeshi we FC Barcelona u-Enrique Orizola.
Ngenxa yokuba indodana yabo yayinekhono kulo mdlalo, baqinisekisa u-Orizola ukuba acinge ngokuvuma u-Iniesta kwi-Academy yase-Barcelona Youth Academy.
Kwidliwano lwakutshanje, uyise ka-Iniesta ukhumbula umzuzu wabuzwa. "Ukhumbuza njani umzuzu apho u-Andrés wayefanele ukupakisha zakhe iingxowa aze ahambe e-Barcelona?". Ngokutsho kwakhe ..Kwakuyiminyaka emide apho wenza isigqibo sokugqibela. Safumana isipho se FC FC kwaye kwafuneka ahambe eLa Masia, kwisikolo seeklabhu, ngokwakhe, njengoko sasingakwazi ukushiya idolophu yaseFientealbilla. Wayengafuni ukushiya intsapho kwaye wandixelela ngokucacileyo ukuba akazange azibone ehamba. Ndimxelele le miba yamathuba awazange afike rhoqo, ukuba uya kufumana isakhiwo esihle kwi-academy ... Emva kweentsuku ezimbalwa uAndrés waya kum wathi: "Utata, ndiya e-Barcelona". Ndadideka, ngoko ndambuza isizathu sokuba wayitshintshile ingqondo yakhe. Yaye yandixelela into eyantyikisayo. Wathi: "Ndiya, kuba ufuna ukuba ndihambe, kuba liphupha lakho". Ukususela kuloo mzuzu ndingathi ndakufundile izinto ezininzi kwindodana yam. Wandifundisa kakhulu xa wayengu 12 kuphela.
Wahamba nabazali bakhe ukutyelela isikolo seLasia esaziwayo kubadlali bebhola, emva koko, abazali bakhe banquma ukubhalisa kwi-academy. Emva kokutsalwa kwesithombe sakhe, abazali bakhe baye ekhaya. Oku kwenzeka ngonyaka we-1996.
Ngokungafani neenkolo ezininzi, i-FC Barcelona idlala bonke abadlali babo bephuma ngaphandle kwedolophu kwihostele yabo ukusuka kwi-13 okanye i-14. Nangona kunjalo, u-Iniesta wayeyinto nje ye-12 kwaye kwakungavamile kakhulu ukuba iqela lize lisayine umntu oselula. Nangona kukho izichaso, iqela liqhubela phambili ngokumqesha kwaye liqinisekile ukuba yilezi zigqibo ezilungileyo kakhulu ezazingenzela zona kunye nomdlali.
Andres Iniesta Qala kwiCom Barcelona
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Isiqalo esinzima
Omnye u-Iniesta wazama ukuhlala ngaphandle kwabazali bakhe, wayehlala ehlala ekhaya kwaye wayezigcina ehlala naye.
Uthi u-Iniesta uthi "Wakhala imilambo" ngosuku awashiye ngalo La Masia kwaye wazama ukuhlukaniswa nabazali bakhe. Wayenentloni kwaye wagcinwa kuye xa ekhona.
U-Young Andres Iniesta Ulahlekelwa ngabazali bakhe
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukunyuka Kwigama
Ufumene iqela le-Barcelona phantsi kwe-15 ukunqoba kwiNdebe yeNkulumbuso ye-Nike ye-1999, ibhala iqhosha lokuphumelela kwinqanaba lokugqibela lokugqibela, kwaye yabizwa ngokuba ngumdlali wezokutyelela. Ngezantsi umfanekiso weGudiodiola onikezela ku-Iniesta, lakhe iqela.
U-Young Andres u-Iniesta ufumana umvuzo Pep Guardiola
Indlela yakhe, ibhalansi kunye nekhono elikhokelela eSpain ukuphumelela i-UEFA YaseYurophu ye-Under-17 Championship 2001 kunye ne-Under-19 Championship kunyaka olandelayo.
Emva kokuba u-Iniesta efike kwiqela, umphathi-ke Pep Guardiola Ndatsho ngokutshatyalaliswa omnye nomphakathi Xavi: "Uya kundithatha umhlalaphantsi. Le nkwenkwe [Iniesta] iya kususa sonke "
Uphela wagqiba uGradiola ethatha umhlalaphantsi kwi-career yakhe ye-11 kwiqela elithe lavela kwi-1990 ukuya kwi-2001.
U-Andres u-Andres u-Iniesta, ukunyanzelisa Pep Guardiola ukuba uthathe umhlalaphantsi
Bonke abanye, njengoko bethetha ngoku iimbali.
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
U-Andres Iniesta uvela kwimvelaphi yentsapho ethobekileyo kunye nobutyebi. Uhlobo lwaseSpain oluqhelekileyo.
Umtsalane wakhe weshishini owaqalisa ukususela ekuqaleni. UJosé Antonio Iniesta waqala njengomsebenzi wokwakha ngaphambi kokuba abe nobukhosi bezoshishino. Xa wayenalo msebenzi wokwenza, wayesebenzisa ukufudukela enxwemeni ukuya kusebenza njengomlungiseleli.
UAndres Iniesta U-Dad-José Antonio Iniesta
Uhlala ethanda umdlalo webhola kwaye wenza yonke imizamo, ngoko u-Andrés unyana wakhe wayedlala iphupha lokuba nebhola ezinyaweni zakhe.
UJosé Antonio noAndres
Ukususela kwiintsuku zakhe zakudala edolophini elincinane laseFenentealbilla eSpeyin ade afike kwiintlanganiso zebhola lebhola lehlabathi, uJosé Antonio uye wayeza kwindodana yakhe.
U-Andres u-Iniesta ulwalamano lwakhe noyise, uJoseph
Uyaziwa ngokukhala xa ebona unyana wakhe enentlungu okanye enzakele. NgokukaJosé Antonio Iniesta,
"Ewe, eninzi. Ndikhala ngokulula. Ndikhala xa u-Andres andibuhlungu okanye ndimbona entlungu eyazi ukuba into ayihambi kakuhle. Ngaphezu koko, kwakukho ixesha elininzi lokulila xa u-Andrés engekho ekhaya ukuba aqale umsebenzi wakhe kwiCom Barcelona. "
Nangona bekuninzi lwabadlali kwihlabathi, u-Iniesta usenokuba nexesha loshishino lweentsapho.
UJosé Antonio Iniesta kunye noNyana, u-Andres Iniesta owenza ishishini loSapho
Okwangoku, u-José Antonio uqhuba i-winery yasekhaya uBodegas Iniesta. Xa abantu bemcela ukuba athelekise unyana wakhe ngewayini, uthi "Yayiza kuba yiwayini efanelekileyo, efanelekileyo neyengqondi."
U-Iniesta Sr. uchaza indlela unyana wakhe oye wagxila ngayo ebhola lakhe kwaye wenza kakuhle kwiqela kunye nelizwe.
"Akazange afune ukuba yinkokheli okanye umphathi wento," uthi. "Kukho abaphathi abaphumelela indima yabo ngobungqina babo nabanye abenza njalo ngokuthobeka kwabo, banyulwa ngamalungu abo. Unyana wam Andres nguye omabili. "
UMAMA: UMaría Luján uchazwe ngezantsi unina kaAndres Iniesta.
Andres Iniesta noMama, uMaría Luján
UMaría Luján akayena mntu umntu osasaza kodwa umntu owaziwayo ukuba ubukele phantse yonke umdlalo wakhe unyana oye wadlala ukususela ekuqaleni komsebenzi wakhe.
USISI: UMaribel Iniesta nguye kuphela udade kunye no-Andres Iniesta. Wakhula kwindawo apho ishishini lewayini likhula khona. Ufana naye yena akafani noyise.
U-Andres udadewabo ka-Iniesta-Maribel Iniesta
UMaribel usenamathela kwiingcambu zakhe njengoko okwangoku elawula inkampani yakhe yewayini yewayini.
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
U-Andres Iniesta Uthando lwebali kunye nobomi bujikeleze umfazi omnye. Akayena mnye ongowona mhle, uAnna Ortiz.
U-Andres Iniesta Uthando Lwebali kunye no-Anna Ortiz
U-Anna Ortiz ungumCatalan kunye neengcali kwizakhono zokuzenzela, ukubonisana nomfanekiso,
iingubo zokugqoka, ubuhle kunye nempilo, ngoku usebenza njengomqambi wangaphakathi kwiCoton naseBois.
Badibana ngethuba lexesha u-Iniesta wayenobungozi ngokumelana naye ngonyaka we-2008. Wayemthandana naye ngelixa wayemnika inkonzo yezempilo ye-physiotherapy.
NgoSeptemba 2010 Andrés Iniesta waqinisekisa ukuba uAna wayekhulelwe ngumntwana wakhe. Wazala uValeria Iniesta Ortiz. Ngezantsi umfanekiso weValeria kunye nabazali bakhe.
Andres Iniesta, uAnna Ortiz kunye nentombi yabo, iValeria
Andres iniesta kunye no-Anna Ortiz emva kweminyaka emine yokuhlala ngokuvuya kunye banquma ukutshata ku-2012. Umtshato wenziwa kwinqaba yaseTamarit kufuphi neTarragona.
Phakathi kwamagama adumile ekhoyo kulo mtshato kwakunguLionel Messi, kunye nomdlali wase-Barcelona uSamuel Eto'o.
Kungekudala emva komtshato wabonisa iindaba kwi-3.9million abalandeli kwi-Twitter, ukuthumela umfanekiso wakhe nomfazi wakhe kunye ne-tweeting: 'Ngumhla omangalisayo! Ndinganalo iphephandaba ekuseni.'
Umtshato we-Andres Iniesta
UAndres Iniesta kunye nomfazi wakhe omtsha uAnna Ortiz basebenzise intshontsho yabo elunxwemeni e-Cancun, eMexico. Kulapho, abanye abasandul 'ukutshata babonakala bevuya kakhulu kwaye bekhululekile njengoko benza ubuninzi bezulu.
UAndres Andesta ujabule kunye nomfazi
Nge-31st kaMeyi, i-2015, u-Andres no-Anna banomntwana wabo wesibili kunye nonyana wokuqala. Igama lakhe nguPaolo Andrea Iniesta.
Andres Iniesta isapho esipheleleyo sefoto
UAndres u-Iniesta ungumntu olungileyo othanda ukuchitha ixesha elifanelekileyo kunye nezingane zakhe. Uhlala ezama ukuvumela ihlabathi ukuba likwazi oko. Umzali wokwenene obeka abantwana bakhe ngaphezu kweemfuno kunye nezinto azifunayo.
Andres Iniest- Ubaba Onyamekelayo
Njenge Radamel Falcao kwaye URobert Lewandowski, Andres Iniesta uye wahlala ubomi obusondeza ubomi.
U-Andres Iniesta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Inkampani yewayini
Ewe, abaphathi be-Premier League Sir Alex Ferguson kunye noHarry Redknapp babedume ngokuthanda kwabo iwayini, kodwa akukho namnye wabo oye waya kweso sidiliya okanye kwimpini.
Ngaphezu koko, abadlali bebhola banamhlanje bayakwazi ukubeka ubutyebi babo kwimoto yezemidlalo okanye kwiindawo zokuhlala eziqhenqileyo, kunokuba batyalwe kuyo nayiphi na into efana ne-esoteric njengento yokulima iidiliya.
Kodwa mhlawumbi ngokungaziwa kakuhle, ngenxa yokuziphatha kwakhe okuzolileyo, nguAndres Iniesta obanike ixesha kunye nemali kwimveliso yewayini.
Andres Iniest- I-Wine Wine Expert
Ngexesha lomtshato, wenza zonke iindwendwe zakhe zisela iwayini yakhe i-Iniesta ebizwa ngokuba yiNtombi yaseValeria.
Ishishini layo lentsapho kuye. Ukuba uhlala eSpain ungabona kwakhona ubuso bakhe buphuma kwiintengiso ezikhuthaza iwayini kwi shishini lakhe, Bodega Iniesta. Eli li shishini elikhulu kwaye yonke intsapho ibandakanyeke kuyo.
Intsapho esele ibeneli shishini ngaphambi kokuba ibe ngumdlali webhola ophumelelayo, kwaye njengoko sele ekhulile uye wabandakanyeka ukwandiswa kwayo.
Enyanisweni, u-Iniesta uyisizukulwana sesithathu esivela kwintsapho yakhe ukuba athathe inxaxheba kwishishini lewayini, eyasungulwa ngumkhulu wakhe uYose Antonio.
Ngokwenyani, intsapho yakhe inamahektare angama-180 yezidiliya, kwaye zonke iwayini zenziwe kwiziqhamo zayo ezikhethekileyo.
Andres Iniesta Iivini zeVini
Ibhizinisi lise-Albacete, ehamba ngeeyure ezimbini ukusuka eValencia, kunye neeyure ezimbini neyesigama ukusuka eMadrid, i-market enkulu. Inkampani yakhe isebenzisa abantu be-35, i-25 kwi-winery, kunye ne10 ngexesha elipheleleyo kwizidiliya apho kuvuna izithelo zewayini ezikhethekileyo.
Andres Iniesta izithelo zewayini
Njengokuba ngexesha lokubhala, inkampani yakhe ithengisa iwayini ebizwa ngokuba yintombi yakhe, uValeria, kunye nomnye emva kwendodana yakhe uPaolo Andrea.
Wabuye wazisa enye iwayini ebizwa ngokuba yi "116" ekhunjulwa ngomzuzu emdlalweni xa efumene injongo yokuphumelela ekupheleni kweNdebe yeHlabathi ye-2010.
Ngokubanzi, i-1 kwiibhotile ze-1.2 zewayini ziveliswa kwinkampani yakhe ngonyaka. Iwayini yakhe ifumaneka kwii-33 kumazwe, kuquka ne-East Asia, kumzantsi, ephakathi nenyakatho yeMerika, nakwintshona neMpuma yeYurophu. Kwi UK bathengisa nge-£ 6.50 kwi-£ 17.
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -WayeyiMadrid Fan
Njengowomnye umfana webhola yebhola, uAndres Iniesta uxhasa iqela lakhe lendawo, u-Albacete kunye neBarcelona yayisisigxina sesibini kuba wayemnqula uMelp Laudrup. Xa wayeneminyaka emithandathu kuphela, amaCatalonia anqobisa i-7-1 yakhe ethandekayo kwaye wahlakulela inzondo ebuncinci eyayingenelisekile ngokutshintsha ukunyaniseka kwabadlali abathandwayo baseMal Madrid.
Utshintsho lwakhe kwiintlonipho lwaye lwavuzwa xa uLaudrup ehambela kwi-Real Madrid kwi-1994. Njengoko kubonakaliswe ngaphambili, Nguyise owayemenza amanyanise ne FC FC Barcelona.
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Uhlonishwa kakhulu
Njengoko ngexesha lokubhala, u-Andres Iniesta ngokungathandabuzekiyo uyona mdlali ohlonishwayo eSpeyin. Iwayini yakhe ithengisa kakuhle eMadrid, ikhaya labadlali bakhe.
E-Catalonia uhlonishwa njengomphathi weBarcelona, ​​kunye nakwezinye i-Spain uhlonishwa njengowomntu ophumelele iNdebe Yehlabathi yeSpeyin.
Kwakhona, ungumntu osapho waseSpain, abantu abayayixabisayo. Kwaye akabandakanyeki kwingxabano yezobupolitika, abanye abadlali baseBrazil okanye i-Real Madrid ngamanye amaxesha.
I-Andres Iniesta Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ngelinye ixesha akazange afune i FC FC
I-Barcelona inkwenkwezi u-Andres Iniesta uye wachaza ngokucacileyo ukuba ekuqaleni akafuni ukujoyina iqela laseCatalan njengelutsha ngenxa yobundlobongela bentsapho yakhe eqinile. Wayefuna umngeni omtsha, umnqweno wokufudukela kude ekhaya.
Ngamazwi akhe, "Andizange ndifune ukuza kuba ndandicinga ukuba ndihlala kunye nabo. Kwakudingeka ndihambe kwindawo ede ngaphandle kwabo, " U-Iniesta wathi BEIN SPORTS.
Ukuhamba kweveki kunye nokuthetha nobawo kwamenza wajika.
UAnderson waqhubeka ..."Ndibawo ndineentembelo ezininzi, uninzi lwamaqabane kwaye ndiyazi ukuba xa undixelela izinto, ngokuqhelekileyo uyaphumelela. Ndiyayihlonela ubawo kwaye ndiyazi ukuba kufuneka ndiyidle. Emva kokuba ndigqibe isigqibo sokuba ndidlalele i FC FC Barcelona, ​​ndabona iinyanga ezimbi kunazo zonke zobomi bam njengomntu, kodwa ngoncedo lwabantu bonke, usuku ngalunye, lube lungcono. "
Akudingeki ukuba uthethi, isinqumo sikaQeesta sokuqala esisongelayo senze kakuhle ngokucacileyo.
U-Andres Iniesta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Amanqaku akhe amaninzi
U-Iniesta unamagama amaninzi. I-Press Press yaseSpain ihlala ibhekisela kuyo Don Andres ngelixa abanye bembiza El Ilusionista (I-Illusionist) ngenxa yokukwazi kwakhe nokuzimisela ukudlala nasiphi na isikhundla kwi-pitch.
Abanye bamthiya ngu-El Cerebro (Ubunjongo) ngenxa yeengcaphephe zakhe ezibalaseleyo.
Ekubeni i-Galacticos eyi-Real Madrid, i-Iniesta iphinde ibizwa ngokuthi ngu-El Anti-Galactico.
Ekugqibeleni, uhlaza luka-Iniesta lwamahlunu luye lwamfumana igama lesidlaliso (i-Pale Knight).
U-Andres Iniesta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Emva kwe-Stole i-Akhawunti yeG
U-Andrés Iniesta usebenzisa i-Instagram njengomnye umntu. "Ndiyihlo othanda ukuthatha imifanekiso yabantwana bakhe, ukutya okuyiyo, kunye nezakhiwo ezithakazelisayo," Wabhala kwithuba elinguMva.
Ngelinye ilanga, u-Iniesta ngokukhawuleza wafumana i-akhawunti yakhe imisiwe, nge-Instagram ibanga ukuba mhlawumbi wayephula umthetho wenkonzo yenkampani kunye nezo zentsapho, ukutya kunye nezithombe zokwakha.
U-Iniesta wafumanisa ukuba into engaqondakaliyo, kwaye loo nto yayifumene ngakumbi xa i-Instagram yayo ikhona, ngaphandle kwesixwayiso, ithathe indawo enye noAndrés Iniesta.
U-Iniesta wazama ukufikelela kwi-Instagram ngokuphindaphindiweyo kungekho mpendulo evela kwinkampani, nangemva kokuba iifoto zakhe zishiye kwaye igama lakhe lomsebenzisi linikezelwa omnye umntu.
Kodwa ekugqibeleni i-Instagram yenza izinto zichanekile, zibuyisela i-akhawunti yasekuqaleni yaseInster kunye nokunyanzelisa inkwenkwezi yebhola ekwenzeni enye, igama lomsebenzisi elincinci elincinci.
Kwinkcazo enikezelweyo Gizmodo, I-Instagram ayifani ngokucacileyo malunga nokuba into efana nale ikwazi njani ukuba yenzeke ngokukhawuleza kwaye ingekho isizathu esicacileyo okanye esilungileyo.
"Senze iphutha apha kwaye sibuyise i-akhawunti ngokukhawuleza njengoko sifunde ngako," le nkampani. "Ukuxolisa kwethu kuphuma kuMnu. Iniesta ngenxa yeengxaki esizibangela."